Tirada ajaaniibta Jaamicadaha Dhigta oo Yaraatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada ajaaniibta Jaamicadaha Dhigta oo Yaraatay
La daabacay onsdag 23 maj 2012 kl 13.20
Is-bedel ballaaran ayaa ku dhacay tirada ardeyda jaamicadaha dibadda ugu yimaada ee asal ahaan ka soo jeeda waddammada ka baxsan Yurub, kolka la eego iyada oo ey sannad ka soo wareegtay kolkii la sharciyeeyey in dhaqaale lagu dhigto, halkii ay hore bilaashka uga ahayd.
Iyadoo ay 80% ey hoos u dhaceen ardaydii wax-barashada sare dalkan u iman jirtey, badankoodna ka soo jeedaan waddammada dhaca qaaradda Aasiya, sida ku cad war-bixin ay soo saartay hayadda tacliinta sare.
Wixii intaa ka horeeyay ayey aad ugu badnaayeen jaamicadaha dalkan ardayda ka soo jeedda dalka dibaddiisa, mararka qaarkoodna eyba gaari jireen 50%, kuwaasina oo badankood ka soo jeedeen waddammada Yurub ka baxsan. Halka sannadkii tahay ay dawladdu go'aamisay in tacliinta sare ey ku dhigtaan ajaaniibta aan ka soo jeedin waddammada xubnaha ka ah ururka EU-da dhaqaale gaarsiisan 100 illaa iyo 150 000 sannadkii.
Saadaalin ay sameeysay hayadda hoggaanka tacliinta sare ayey ku caddaatay in ardeydaa badankood ka soo jeedaan waddammada Aasiya, iyadoona sidoo kale loo baahan yahay mustaqbalka in dib u habeeyn lagu eego tirada goobaha wax-barashada tacliinta sare ee dalka.
Wasiirka tacliinta Jan Björklund oo middaa wax laga weeydiiyey ayaa sheegay in aanay dawladdiisu diyaar u ahayn in aaney ardeyda ajaaniibtu ku soo dooran oo keliya iney tacliin sare ey dalkan ka bartaan qimaha dardii, balse loo baahan yahay in tayada kor loo qaado iyo sidoo kale in aaney tallaabadani ahayn mid hor-kaceeysa in ardayda dalka u dhlatay qudhooda lagu soo rogo iney dhaqaale ku dhigtaan tacliinta sare.